National News – Page 395 – सकारात्मक परिवर्तनवाहक विचार, कला/साहित्य र सत्य खवरको बाटाे
संघीय गठबन्धनद्वारा देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रम सार्वजनिक
काठमाडौं । सङघीय गठबन्धनले तेस्रो चरणको कार्यक्रम सम्पन्न गरेपछि त्यसको समापन लगत्तै देशव्यापी अन्तरक्रिया कार्यक्रमको घोषणा गरेको छ । साउन र भदौ गरी दुई महिनाभित्र देशभरका १० स्थानहरुमा वृहत् अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न गरिने तालिकासहित सङघीय गठबन्धनका प्रवक्ता प्रा.डा. ओम गुरुङद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा जानाइएको छ । गठबन्धनले काठमाडौं, कैलाली, दाङ, रुपन्देही, मकवानपुर, रौतहट, महोत्तरी, सुनसरी, झापा […]
केसीको अनसनमा गढेको युवा आँखा
आठौं पटक आमरण अनसनमा बसेका डा. के.सी. का बारेमा राम्रा नराम्रा टीकाटिप्पणीहरु उठेका पनि छन् । तर उनी ढुक्कताका साथ बसेका छन् अनसनमा । उनी मनिस हुन्, उनको पनि हाम्रो जस्तै शरीर छ, भावना छ र विचार पनि । व्यक्तिगत रुपमा उनले कुनै मेडिकल कलेज खोल्ने, कतैबाट कमिसन खाने र लाभ लिने जस्ता केही कतै […]
पौडेललाई प्रधानमन्त्री बन्न ओलीको प्रस्ताव
काठमाडौं । आफ्नो सरकार अल्पमतमा परेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई प्रधानमन्त्रीका लागि प्रस्ताव गरेका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले आफूलाई धोका दिएको भन्दै ओलीले दाहाललाई प्रधानमन्त्री नबनाउने दाउमा कांग्रेस फुटाउने प्रयत्न गरेका छन् । तर ओलीले बुधबार टेलिफोनमार्फत् गरेको त्यस्तो प्रस्ताव आफूलाई पौडेलले अस्वीकार गरिदिएका छन् । […]
काठमाडौं । भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि दुई प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य प्रतिशत ब्याजदरमा पुनःकर्जा प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई निरन्तरता दिइएको छ । राष्ट्र बैंकले विहीबार जारी गरेको मौद्रिक नीतिमा वित्तीय संस्थाले भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि दुई प्रतिशतसम्मको ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउनुपर्ने र त्यस्ता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई शून्य […]